Gam akporo nchedo: kpuchido mkpanaka gi ma obu mbadamba gi site na ntuziaka ndị a | Gam akporosis
Ọ bụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche sistemụ nrụọrụ na mmemme nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị, nchekwa na-amawanye jijiji, yabụ gam akporo anaghị ala azụ ịrụ ọrụ yana ebumnuche doro anya iji nye ndị ọrụ niile nchekwa kachasị, na-anwa gbochie ụdị nke ụdị dị iche iche, site na nyochaa atụmatụ ndị ahụ, na-enye nchebe ka ukwuu na-anwa iwelata ihe omume sitere na ọrụ nke ikpo okwu, ịchọpụta adịghị ike nke ndị ọrụ, na-egbochi akaụntụ ndị na-adịghị agbaso iwu ma na-eme ihe ngwa ngwa iji gosipụta nchebe kachasị ukwuu.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere izu ohi data, nje ma ọ bụ Trojans nke dị maka gam akporo na nke nwere ike izuru ozi gị dị oke ọnụ (kọntaktị, ozi, foto na ndị ọzọ), nke a bụ nchịkọta akụkọ iji nyere gị aka ichebe onwe gị dịka o kwere mee site na mwakpo ma ọ bụ nkwarụ nche nke dị maka gam akporo.
Kemgbe ọnwa ole na ole, LokiBot malware nọ na-achụ ndị ọrụ gam akporo yana ndị nke ...
New 'Ghimob' malware na-elekwasị anya na ngwa ngwa akụ
por Manuel Ramirez eme Ọnwa 9 .
Ọ gaghị abụ malware ikpeazụ akpọrọ 'Ghimob' nke bịara metụtara gam akporo, mana ọ bụ ịdọ aka na ntị zuru oke maka ...
por Miguel Gaton eme Ọnwa 11 .
Tọ ntọala nchekwa gị maka ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị bụ ezigbo ego ịchekwa yana ịnwe ...
por Miguel Gaton eme Afọ 1 .
You maara nke niile data na onwe ozi na ị na-echekwa na ekwentị mkpanaaka gị? Foto, vidiyo, akụkọ ihe mere eme ...
Iji malite ịgwa gị na na nke a na m ga-akọwa otu esi ledoo WhatsApp, ọ bụ post na-agbaso ...
The Galaxy S7 na S7 Edge-anọgide na-enweta nchedo nche
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 4 mgbe mwepụtara nke Galaxy S7 na S7 Edge ma ha ka na-enweta mmelite ...
Kpachara anya !! Obi abụọ ngwa nwere ike iduhie, ma na-Google Play Store
por Francisco Ruiz eme Afọ 1 .
Taa, m wetara gị vidiyo ihe dị iche na ihe ejiri gị ebe a na Androidsis, vidiyo nke na-adịghị ...
por Manuel Ramirez eme 2 afọ .
Ala ọzọ ebe Android gbagoro Apple na iPhone ya. Oge a ọ bụ na nzuzo ...
Malware na Storelọ Ahịa Play?
por Francisco Ruiz eme 2 afọ .
Ọ dị otu izu, ụbọchị asaa ogologo oge si na ebe a Androidsis katọrọ mmebi iwu ga-ekwe omume site n'aka onye nrụpụta ...
Anyị na-eweghachi na ANDROID ALERT, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, akụkọ nke akụkọ kachasị elu banyere nchekwa na ...
Malware ka bụ nsogbu nkịtị na Google Play. N'ime ihe karịrị otu oge, ngwa ndị nwere ...
Gbanyụọ mkpuchi ihuenyo
Etu esi eji njikwa gam akporo gam akporo, njikwa gam akporo